Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 18/02/2020)
Ukuba uceba ukubona kumazwe amaninzi ngoxa ehamba ngololiwe eYurophu kusenokuba bubulumko ukuba siqwalasele utyale imali Interrail Pass, okanye abemi EU ubize Eurail. An Interrail Pass uya kwenza yakho zokuhamba train Elula. kunjalo, Ukuba ukwindlela mali yaqiniswa, Amatikiti kuvumelekileyo ukusebenza akunjalo (ingakumbi ukuba ubukhulu becala uhamba ngasempumalanga Jemani ). Cinga ibhajethi yakho uze wenze uphando phambi kokuba incwadi lokuphumelela zakho zikwakhamisela. Our website saveatrain.com Yiyo le indawo ephelele ukuqala ukunceda ukucwangcisa uhambo lwakho lonke elaseYurophu.
Most trains have either a restaurant, iinqwelwana cafe okanye iinqwelo umthamo eza ngokuthengisa kwiisendwitshi, iziselo ezibandayo kunye ngaphezulu. Kodwa ke ukuba ngaba mali ohambahambayo tight okanye eqondene iimfuno Kadir, kububulumko ukuba izmuncumuncu nawe endleleni yakho.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-tips-for-traveling-by-train-in-europe%2F - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)